အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: တရုတ်နိုင်ငံသား သစ်ခိုးထုတ်သူများနှင့် အဂတိတရား လိုက်စားသူများကြောင့် တရုတ်ပြည်သို့ မှောင်ခိုသစ် ခိုးထုတ်မှု အရှိန်မြင့်တက်
"ကျွန်တော်တို့ ရွှေလီဘက်မှ တွေ့ရတဲ့ သစ်ပုံတွေက မြင်မကောင်း ကြည့်မကောင်းပဲ။ ထားစရာ နေရာတောင် မရှိသလောက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာကော သစ်တောတွေ ကျန်သေးရဲ့လားလို့ မေးလို့ရတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အစီးရေ ၂၇၀ နဲ့ ၃၀၀ ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ ၁၂ ဘီးကား၊ ၂၂ ဘီးကားတွေနဲ့ နေ့စဉ်တင်နေတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလည်း တစ်ခုခု ပြောသင့်နေပြီလို့ ထင်တယ်။ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အသား ဖဲ့ယူသလို ခံစားရလို့ ပြောပြတာပါ" ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
အပင်ကြီးတွေ ၂၂ ဘီးကားနဲ့ ခြောက်လုံးလောက်ပဲ ရတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အမြစ်ပါမချန်ဘူး၊ ပင်စည်ကို သစ်လုပ်တယ်။ အကိုင်းအခက်ကို မီးသွေးဖုတ်တယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားကို export ပြန် လုပ်တယ်။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေတယ် . . . . .
ယင်းကဲသို့ သစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းများ ထုတ်ယူလာသည်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လနောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲများ စတင်ချိန်မှစပြီး အရှိန်မြင့်တက်လာကြောင်း၊ နယ်မြေမအေးချမ်းသည့်အပေါ် ပိုမို အခွင့်အရေးယူ အသုံးချနေသည့် သဘောမျိုး ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိ အနေအထားများသည် တရုတ်နိုင်ငံသားတို့ ပြည်တွင်းတွင် နိုင်ငံသားများထက်ပင် အခွင့်အရေးထက် ပိုရနေကြောင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသည့် အနေအထားတွင် အခွင့်ကောင်းယူခြင်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ရှိနေခြင်း၊ လမ်းကြောင်းနဲ့ သွားသည့် ခေတ်စနစ်တစ်ခု ထွန်းကားနေခြင်းတို့မှာ အဓိက အကြောင်းရင်များဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ကြသည်။
"သူတို့ ၀င်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ယန္တရားနဲ့ကိုယ့် ကိုယ့်နဲ့ကိုယ် လာသယ်နေကြတာလေ၊ ကချင်ပြည်နယ် မိုးမိတ်လောက်က ဆင်းလာတာ။ အခုဆို စစ်ကိုင်းတိုင်း မန္တလေးတိုင်းလောက်အထိ ရောက်လာပြီ။ သိပ်ပြောင်ကျပြီး သိပ်မတရားမှုတွေ များနေပြီ။ အပင်ကြီးတွေ ၂၂ ဘီးကားနဲ့ ခြောက်လုံးလောက်ပဲ ရတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အမြစ်ပါမချန်ဘူး၊ ပင်စည်ကို သစ်လုပ်တယ်။ အကိုင်းအခက်ကို မီးသွေးဖုတ်တယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားကို export ပြန် လုပ်တယ်။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေတယ်" ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ရွှေလီတွင် သစ်လုံးကားများ နေ့စဉ်ဝင်ထွက် သွားလာနေကြကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်တွင် ဤမျှပေါများသော သစ်များ မရနိုင်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ သစ်ထုတ်ခွင့် မရှိကြောင်း။ ထုတ်ယူပါက ပြင်းထန်စွာ အရေးယူ ခံရတတ်ကြောင်း။ သို့သော် မြန်မာပြည်ဘက်မှ မှောင်ခိုသစ် များများဝင်လာသည့်အပေါ် တရုတ်ဘက်က ပိတ်ပင်ထားမြစ်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ တစ်တန်ကို တရုတ် ယွမ်ငွေ ၁၂၀၀ ကို အကောက်အခွန်အနေဖြင့် ကောက်ယူကြောင်း၊ မြန်မာဘက်မှ အလကားနီးပါးနှင့် ရသည်ဆိုတော့ တစ်တန် ၁၂၀၀ ပေးလိုက်ရလည်း မှောင်ခိုသမားများအတွက် ဘာမှထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။
"ဘာကြောင့် မှောင်ခိုမှုများ ဤမျှလောက်အထိ ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်း လုပ်နေကြတာလဲ မသိဘူး။ မြန်မာပြည်က သစ်တွေကော ကျန်ဦးမှာလား မေးစရာရှိတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ စီးပွားရေးအရ အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ စက်မှုဖွင့်ဖြိုးမှုကို စောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါ တရုတ်ပြည်တွင် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုတို့ကို ခံစားလာရတယ်။ တစ်ချို့မြို့ကြီးများတွင် နေမမြင်ရ။ ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် မီးခိုးငွေ့များလို၊ မိုးမှောင်ကျနေသလို ထင်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ မိုးရွာချလိုက်မှသာ နေကိုမြင်တွေ့ခွင့် ရတယ်။ ဒါက သူ့အကြောင်းနဲ့သူ။ သူနိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် လုပ်ယူသည့်အတွက် သူပြန်ပေးဆပ်လိုက်ရတာပါ။ အခုသူ့နိုင်ငံတွင် လုပ်ခွင့်မရသည့် စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ အိပ်မက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာပြီးအကောင်ထည် ဖေါ်ကြတယ်။ ဖော်ခွင့်လည်း ရထားကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တောင်ကတုံးတွေပဲ ကျန်တော့ရင် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲ မေးစရာ ရှိလာပေလိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုပါက သစ်တောတောအားလုံး ဆုံးရှုံးပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးသည့်ဒဏ်ကို ပြည်သူများက ခံစားကြရမယ်" ဟု သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသရှိ သစ်မှောင်ခိုကားများအား ဧပြီလဆန်းပိုင်းတွင် တွေ့ရစဉ်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:11 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook